2016 September | MoeMaKa Burmese News & Media
အစိုးရဟောင်း၏ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများကြောင့် အုန်းခြံမြေများ သိမ်းပိုက်ခံရ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ရခိုင်ပြည်နယ်-သံတွဲခရိုင်-ဂွမြို့ နယ်၊ လောင်းကျိုးကျေးရွာအုပ်စု သမ္ဗာန်ချိုင်ကမ်းခြေရှိ တောင်သူလယ်သမားများ ဘိုးဘွားပိုင် အုန်းခြံမြေသိမ်းပိုက်ခံရမှု နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအား ယနေ့ (၃၀.၉.၂၀၁၆)နံနက်...
အောင်လွင် ( ကံပေါက်သား ) – ငါးရံ့တစ်ကောင်ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ
အောင်လွင် ( ကံပေါက်သား ) – ငါးရံ့တစ်ကောင်ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ (Dawei Watch, တနလာင်္ရီ အပတ်စဉ်) မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ (ပြည်တွင်းမှာ အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲ အရေးယူခံရတဲ့ ဆောင်းပါးကို လေ့လာနိုင်ရန်...
ငါးရံ့တကောင်၏ ရင်ဖွင့်သံ ကို Delco က အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲပြီး အရေးယူ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ Dawei Watch Foundation ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်လွင်က ဒေသခံ...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – (Dull)
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – (Dull) (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆
ကာတွန်း မိုးသွင် – အခု တိုက်နေတာ ဘယ်က တစိမ်းတွေမို့လဲ
ကာတွန်း မိုးသွင် – အခု တိုက်နေတာ ဘယ်က တစိမ်းတွေမို့လဲ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆
ထက်ခေါင်လင်း/Myanmar Now – ရန်ကုန်အိမ်အကူနှစ်ဦးနှိပ်စက်ခံရမှုကို အပတ်စဉ် ကြားနာစစ်ဆေးမည်
ထက်ခေါင်လင်း/Myanmar Now – ရန်ကုန်အိမ်အကူနှစ်ဦးနှိပ်စက်ခံရမှုကို အပတ်စဉ် ကြားနာစစ်ဆေးမည် (Myanmar NOW) မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ ရန်ကုန် (Myanmar Now) – ရန်ကုန်မြို့ အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်မှ ကလေးအလုပ်သမားနှစ်ဦး...
စံလှကြီး ● အမုန်းစကားပြောသူများ၏ စိတ်ထား အခြေခံ သုံးရပ် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆ လူ့သမိုင်း တလျှောက်လုံး လူတွေ၏ နေပုံ ထိုင်ပုံ နေ့စဉ်ဘဝများကို များစွာပြောင်းလဲသွားစေခဲ့သော အံ့မခန်း တီထွင်မှုများ...
လင်းငယ် ● ဆုံးမကွပ်တောင်း မကွပ်တောင်း (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆ ● ဇာတ်လမ်း မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေ ကြည့်ဖြစ်ခဲသည်။ ရှားရှားပါးပါးကြည့်ဖြစ်သည့်ဇာတ်လမ်းတခုကို မှတ်မိနေသည်။ အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းတကွက်ကို အထူး သတိထားလိုက်မိသည့် ပြန်ပြောပြချင်...
လင်းခါး ● တော်လှန်သော ကြက်မောက်သီးများ
လင်းခါး ● တော်လှန်သော ကြက်မောက်သီးများ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆ အနုပညာဆိုတာ ဝါဒဖြန့်တာပဲ ဝါဒဖြန့်တယ်ဆိုတာ ခြေအိတ်လက်ဆောင်ပေးတာ အိပ်မက်ဆိုတာ လူ့အစိတ်အပိုင်းတခုပဲ လူ့အစိတ်အပိုင်းတခုဆိုတာ အူအတက် ပဋိပက္ခဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာနှစ်ခု ပေါင်းစည်းတာပဲ...
မောင်မောင်စိုး ● ပထမအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံအား သုံးသပ်ချက် – အပိုင်း (၁၁)
မောင်မောင်စိုး ● ပထမအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံအား သုံးသပ်ချက် – အပိုင်း (၁၁) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ ● အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ၂၁ ရာစုပင်လုံတွင် အဓိကဆွေးနွေးကြသည့် နိုင်ငံရေးပြဿနာမှာဖက်ဒရယ်အခြေခံမူများဖြစ်သည်။...
သုအိုက်စံ ● မှိုချိုး မျှစ်ချိုး စိုက်ပျိုးခံရတဲ့ စိုက်ခင်းများ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ ဟိုတုန်းက သူပုန်တွေတပ်သားက ဦးနှောက်နည်းတယ် လောပိတဓာတ်တိုင်ကို မိုင်း သွား သွား ခွဲခဲ့တယ်လေ လောပိတဓာတ်တိုင်အောက်မှာ...
သစ်ကောင်းအိမ် ● မဲဆောက်တောင်ခြေ ….
သစ်ကောင်းအိမ် ● မဲဆောက်တောင်ခြေ …. (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ရွှေ့ပြောင်းအစိုးရ ရွှေ့ပြောင်းကဗျာဆရာ မိုဘိုင်းဖုန်းသံတွေနဲ့ ဆူညံနေတဲ့ကမ္ဘာ ဂျနီဗာ ကတိ ကဝတ်တွေထက် ဂျနီဖာလိုပက် (ဇ်) ရဲ့အတွင်းခံပစ္စည်းတွေက...
ကာတွန်း အောင်မော် ● သဘောရိုးနဲ့ပါ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● စက်မှုနှင့် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေး (ယခင် စီအာအို CRO သုတေသနဌာန) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ၂၈၊ ၂၀၁၆ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက လူနေအိမ်၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများဆောက်လုပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ (ရန်ကုန်) အတွက် ၅...
အမေရိကန်သမ္မတလောင်း ဟီလာရီနဲ့ ထရန့်တို့ ပထမအကြိမ် စကားစစ်ထိုးကြပုံ (နိုင်ငံတကာသာဂိ) မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၆ ညနေခင်းက အမေရိကန်အနောက်ဖက်ကမ်း စံတော်ချိန် ၆ နာရီကနေ ၈ နာရီ...
ပြည်တွင်းမှာ ဘာတွေ ပြင်ထားပြီးပြီလဲ နှင့် ဘကြီးမိုး (ကုမုဒြာဂျာနယ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၁ ထုတ်) မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရပ်ခြား ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုများအနက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက အများဆုံး...
လင်းမိုးစွေ – ကိုယ့်သမိုင်းနဲ့ကိုယ် ကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုယ်
လင်းမိုးစွေ – ကိုယ့်သမိုင်းနဲ့ကိုယ် ကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုယ် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ မနက်တိုင်း ငါလျှောက်နေကျ လမ်းပါပဲ အခုလျှောက်နေတဲ့လမ်းကလည်း မနေ့ကလမ်းပါပဲ။ မနက်ခင်းနေရောင်ခြည်ဖျော့ဖျော့ လမ်းပေါ်ဖြာကျနေလေရဲ့ ကျေးငှက်သံတွေ သာသာယာယာ လမ်းကို ကြည့်လျှောက်နေပေမယ့်...